Win32 / Zum! Trojan အကြောင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Semalt သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလမ်းညွှန်ကိုပြသခဲ့သည်
Win32 / Zum! Trojan သည်အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း Windows PC များတွင်လျှို့ဝှက်ကျူးကျော်မှုများကိုပြုလုပ်သော Trojan malware တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမစတင်မချင်းသင်သတိထားမှာမဟုတ်ဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ antivirus ကို detect မလုပ်ဖို့တားဆီးပေးတယ်။ ထို့နောက်သူသည်အသုံးပြုသူကိုရှုပ်ထွေးစေရန်၎င်း၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲနေသည့် Registry တွင်သူ့ဟာသူထည့်သွင်းပေးသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Win32 / Zum! Trojan ကသူ့ဟာသူ copy လုပ်ပြီးအခြား file systems တွေဆီကိုပျံ့နှံ့စေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်အများဆုံးပေးသည်ဆိုပါကထို malware သည်ဝေးလံသောဆာဗာတစ်ခုမှ spyware နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကို download လုပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုသာစဉ်းစားသောအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Semalt မှကျွမ်းကျင်သူ Julia Vashneva ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုမည်သို့ထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အဖိုးတန်လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာခဲ့သည်။
သင် Win32 / Zum / Trojan ကိုရယူနိုင်သည်။
ဖိုင်များသည် p2p ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မျှဝေသည် torrents
ကူးစက် flash ကို drives တွေကို
သံသယဖြစ်ဖွယ် pop-ups, link များနှင့်အချို့သောကြော်ငြာများကိုနှိပ်ပါ
Trojan သည်သင်၏ PC ကိုကူးစက်ပြီးသောအခါစက်သည်နောက်ကျသွားပြီ၊ အချို့သောပရိုဂရမ်များသည်အမှားအယွင်းများပေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်သည်၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာသည်ဆက်တိုက်ပျက်ဆီးသွားပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူသွားနိုင်သည်။ အချက်အနေနှင့်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုသင်နို့ခြောက်အောင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Win32 / Zum! Trojan ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ထွက်ရှာရန်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
Win32 / Zum! Trojan malware ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ပြီးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သင် manual သို့မဟုတ် software-based လမ်းကိုသွားရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သုညပြန်ဖြစ်နှုန်းနှင့်အတူဆိုထားပါသည်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။ အမှန်မှာ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကသင် malware ကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရန်အချိန်ယူရန်သတိပြုပါ။
အဆင့် ၁: သင်၏ PC INA safe mode ကို networking ဖြင့်စတင်ပါသို့မဟုတ် boot လုပ်ပါ
Start menu ကိုသွားပါ
System Boot တက်နေစဉ် "F8" ခလုတ် (ခလုပ်) နှိပ်ပါ
အဆင့်မြင့် boot menu ပေါ်လာမည်
“ safe modeing in networking” ကိုရွေးပြီးနောက် Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
အဆင့် ၂ - task manager ကိုအသုံးပြုပြီး malware ကိုသတ်ပါ
'Alt', 'Ctrl' နှင့် 'Del' ခလုတ်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှိပ်ပါ
task manager ၀ င်းဒိုးပေါ်လာပြီ
process tab မှာ process ကိုဖော်ထုတ်ပြီးသတ်ပစ်ပါ။ အဲဒါကိုညာဖက်နှိပ်ပြီး 'End Task' ကိုရွေးပါ။
အဆင့် ၃: Win32 / Zum! Trojan ကိုသင်၏ control panel မှဖယ်ရှားပါ
အဆင့် ၄။ Win32 / Zum! Trojan browser extensions များကို Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Opera သို့မဟုတ်မည်သည့် browser ကိုမဆိုဖယ်ရှားပါ။
အဆင့် ၅: Win32 / Zum! Trojan ဖိုင်များကို Registry ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ
တစ်ပြိုင်နက်တည်း windows (W) နှင့် R ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ
ပြေး box ပေါ်လာမည်။ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ
Win32 / Zum! Trojan ဖယ်ရှားခြင်း software ကိုအသုံးပြု
အားကောင်းတဲ့ anti-malware software ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Win32 / Zum! Trojan ကိုဖယ်ရှားဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် keylogger များနှင့် rootkit အပါအ ၀ င်ဖိုင်အားလုံးကိုမြန်ဆန်စွာပြီးပြည့်စုံစွာစစ်ဆေးသည်။ အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှုပေးနေစဉ် malware ကိုဖယ်ရှားသည်။ SpyHunter သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော anti-malware ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုကြိုးစားပြီး Trojan တိုက်ခိုက်မှု၏အိပ်မက်ဆိုးမှသင့်ကိုကာကွယ်ပါ။